W-TEL indostrialy ny trano fikojanny mpitrandraka hafanana-Shanghai-Warner-Telecom-GoFair
Malagasy W-TEL indostrialy ny trano fikojanny mpitrandraka hafanana
Ny W-TEL indostrialy ny trano fikojam-pifandraisana hafanana dia fitaovana izay mampiasa ny harena voajanahary voajanahary mba hifanakalozana hafanana eo anelanelan'ny hafanana anatiny sy miala ivelan'ny kabinetra miaraka amin'ny fihenan-tsakafo. Rehefa misy fahasamihafana be ny mari-pana, ny fitaovana dia hanova ny hafanana eo anelanelan'ny hafanana ao anatiny ary mahatsikaika any ivelany amin'ny alàlan'ny sehatra samihafa sy rambo, izay mahatonga ny kabinetra ho rafitra voafehy miaraka amin'ny rafitra fakan-drivotra, ary ny fitaovana anatiny dia afaka miasa araka ny tokony ho izy.
Ny famolavolana ny rafi-pandehan'ny rivotra mifehy ny rivotra, manalavitra tanteraka ny fandotoana avy any ivelany.
Aza avela ho lasa mangatsiaka loatra ny volony
Ny singa manan-danja indrindra manerantany dia mahatonga ny rafitra hiorina kokoa.
W-TEL tokana tsy manam-pahataperana ny antsipiriany, indrindra ho an'ny fampiasana kabinetra ivelany. Teti-panoratana bebe kokoa toy ny andaniny ary mametraka tanteraka ny safidy, mety ho an'ny fametrahana ny mpanjifa.
Structure compact, tsy misy drafitra fanofanana, ary fikojakojana.
Afaka manara-maso ny serasera amin'ny serasera amin'ny serasera RS485.
AC / DC ny angovo azo ampiasaina, ny fanatanjahantena DC dia singa amin'ny VWF (fifandaminana hafan'ny haavon'ny motera), ny fihenan'ny angovo sy ny fihenan-tsakafo.
Notsaraina mialoha ny fametrahana ny orinasa mpamokatra, dia azo antoka ny fahombiazana sy ny kalitaony
• Fanamafisam-peo mihidy: miaro ny fitaovana manohitra ny tontolo manodidina.
• Fanalana hafanam-po: mampiasa fifanakalozana hafanana amin'ny rivotra, mampihena ny fampiasana angovo.
• Fivarotan-tsolika amin'ny fampiasana teknolojia vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika sy fantsom-pahitalavitra
manome sehatra avo lenta.
• Flamindrindra: V-0 ny plastika voasaina
• Fotsy plastika amin'ny plastika plastika noho ny tsy misy jiro moto: tsy maharitra ny fikojakojana.
• Kitapo plastika maivana mba hanamaivanana ny fametrahana sy fametrahana ny fangatahana amin'ny rindrina na varavarana
• Fanorenana maivana sy matevina: vita avy amin'ny tapa-taratasy matevina.
• Fanorenana fanamboarana fanorenana: vatosoa vita amin'ny alizinc metaly- EN 10143
& EN 10327